महिनावारी र अनियमितता - स्वास्थ्य जानकारी - नारी
म १८ वर्षकी भएँ । मेरो महिनावारी सुरु भएको तीन वर्ष भयो । मेरो महिनावारी चार दिन हुन्छ तर यसको अन्तर जहिले पनि डेढदेखि दुई महिना हुन्छ । मलाई नराम्रो रोग लागेको त होइन ? कसरी थाहा पाउने होला ?
समान्यतः महिनावारी २१ दिनदेखि ३५ दिनको अन्तरमा ३ देखि ५ दिनसम्म हुन्छ । किशोरावस्था तथा महिनावारी सुक्ने बेलामा महिनावारीमा अनियमितता तथा ढिलाइ हुन सक्छ ।
त्यसबाहेक अण्डबाहिनी नली, अण्डाशयको संक्रमण, थाइराइड तथा अन्य हार्मोनको असन्तुलन, पोलिसिटिक ओभरियन सिन्ड्रमजस्ता रोगले पनि महिनावारी अनियमित हुन, ढिला हुन वा रोकिन सक्छ, तर किशोर अवस्थामा महिनावारी ढिला हुनुको पछाडि कुनै रोग नहुन सक्छ ।